19 | November | 2019 | Danya Wadi
By danyawadi November 19, 2019 Leaveacomment
M-Media -ရခိုငျပွညျနယျက ရိုဟငျဂြာတှအေပျေါ ကြူးလှနျမှု အပါအဝငျ မွနျမာနိုငျငံအတှငျးမှာ ဖွဈပှားခဲ့တဲ့ လူသားထုအပျေါ ကြူးလှနျတဲ့ ရာဇဝတျမှုတှေ၊ စဈရာဇဝတျမှုတှေ၊ အနာဂတျမှာ ဖွဈလာနိုငျတဲ့ ရာဇဝတျမှုတှအေတှကျ ပွညျ့ဝတဲ့ စုံစမျးစဈဆေးမှုတှေ လုပျဆောငျဖို့ နိုငျငံတကာ ရာဇဝတျခုံရုံး (ICC) က ဒီကနမှေ့ာ ခှငျ့ပွုလိုကျပါတယျ။ ICC အကွီးအကဲ ဖာတူ ဘနျဆူဒါဟာ မွနျမာနိုငျငံမှာဖွဈပှားခဲ့တယျလို့ သတငျးတှထှေကျပျေါခဲ့တဲ့ စဈရာဇဝတျမှုတှအေတှကျ ကနဦး စုံစမျးစဈဆေးမှုပွုလုပျဖို့ ၂၀၁၈ ခုနှဈ စကျတငျဘာလမှာ ခှငျ့ပွုခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ စုံစမျးစဈဆေးမှု အပွညျ့အ၀ ပွုလုပျဖို့အတှကျ အခုနှဈဇူလိုငျလမှာ ထပျမံလြှောကျထားခဲ့ပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံဟာ ICC မှာ လကျမှတျရေးထိုးထားခွငျး မရှိပါဘူး။ အဖှဲ့ဝငျနိုငျငံဖွဈတဲ့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့မှာ ရိုဟငျဂြာတှေ ဒုက်ခသညျအဖွဈ ခိုလှုံနရေတဲ့အတှကျ မွနျမာနိုငျငံက ရိုဟငျဂြာကိစ်စအပျေါ မိမိတို့ […]
1:36 Rare footage smuggled out of Rakhine Who are the Rohingya? Described as the world’s most persecuted people, 1.1 million Rohingya people live in Myanmar. They live predominately in Rakhine state, where they have co-existed uneasily alongside Buddhists for decades. Rohingya people say they are descendants of Muslims, perhaps Persian and Arab traders, who came […]
International courts’ decisions must reflect Rohingya genocide survivors’ concerns, priorities and voices Maung Zarni |17.11.2019 LONDON Coordinated or coincidental, Rohingya activists and international actors justice-seekers this week made historic moves to activate available global justice mechanisms to hold Myanmar accountable for its international state crimes, specifically against Rohingya people. The three specific mechanisms of […]
( RFA ) စမ်းစမ်းတင် 2019-11-17 နယ်သာလန်နိုင်ငံ သဟိတ်မြို့က အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်ခုံရုံးကို ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလ ၉ ရက်နေ့က တွေ့ရစဉ် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ ပဋိညာဉ်စာချုပ်နဲ့ နယ်သာလန်နိုင်ငံ အခြေစိုက် ICJ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ဥပဒေ ပါ တချို့အချက်အလက်တွေကို ဒေါ်စမ်းစမ်းတင်က ကောက်နှုတ်တင်ပြထားပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကနေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံကို ဒုက္ခသည်တွေ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထွက်ပြေးမှုမှာ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု တားဆီးရေးနဲ့ အပြစ်ပေးရေးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ ပဋိညာဉ် ချိုးဖောက်မှုနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ကို ICJ ကမ္ဘာ့ခုံရုံးမှာ အနောက်အာဖရိက တစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ဂမ်ဘီယာက အမှုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံ သည်ဟိဂ်မြို့မှာ ကမ္ဘာ့ခုံရုံးလို့လည်းခေါ်တဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး အခြေစိုက်တာ ပါ။ ကုလသမဂ္ဂပဋိညာဉ်စာချုပ်အရ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဟာ ကိုယ်ပါဝင်တဲ့ ဘယ်အမှုမဆို […]
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်ခုံရုံး (ICC) က ကြာသပတေးနေ့တွင် ရိုဟင်ဂျာ မွတ်စလင် လူနည်းစုကို ဆက်ဆံရာတွင် လူသားမျိုးနွယ်စုအပေါ် ကျူးလွန်သော ရာဇ၀တ်မှုများ ကျူးလွန်ကြောင်း စွပ်စွဲချက်များကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အမိန့်ထုတ် —————————————————————————– The International Criminal Court (ICC) on Thursday authorized an investigation into allegations that Myanmar has committed crimes against humanity in its treatment of the Rohingya Muslim minority. Myanmar is outside of the ICC’s jurisdiction, which is limited to […]
Expert Legal The International Criminal Court (ICC) on Thursday authorized an investigation into allegations that Myanmar has committed crimes against humanity in its treatment of the Rohingya Muslim minority. Myanmar is outside of the ICC’s jurisdiction, which is limited to those states that areaparty to the Rome Statute treaty. However, its neighbor Bangladesh […]
( RFA ) 2019-11-16 တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်၊ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်၊ သမ္မတဟောင်းများ ဖြစ်ကြတဲ့ ဦးထင်ကျော်နဲ့ ဦးသိန်းစိန် Photo: RFA ရိုဟင်ဂျာတွေကို မောင်းထုတ်ခဲ့မှု၊ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု၊ ခြိမ်းခြောက်မှုဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး (ICC)၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး (ICJ) နဲ့ အာဂျင်တီးနား နိုင်ငံတရားရုံးတွေမှာ တရားစွဲဆိုထားတဲ့အပေါ် မြန်မာအစိုးရက ICJ တစ်ခုတည်းကိုပဲ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေလမ်းကြောင်းအရ ဖြေ ရှင်းမယ်ဆိုတာ မဖြစ်သင့်ကြောင်း နိုင်ငံရေးလေ့လာသူတွေနဲ့ ဥပဒေပညာရှင်တွေက ဝေဖန်ထောက်ပြ ကြ ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာတရားရုံးတွေမှာ မြန်မာအပေါ်တရားစွဲဆိုမှုတွေကို မဖြေရှင်းဘူးဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေး ပုံရိပ် ကျဆင်းလာပြီး နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၊ စီးပွားရေး၊ […]
ဗွီအိုအေ (မြန်မာဌာန) 18 နိုဝင်ဘာ၊ 2019 အင်ကြင်းနိုင် နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ တတိယကော်မတီမှာ မြန်မာ့အရေး ဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းကို ကန့်ကွက်ဆွေးနွေးနေတဲ့ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဟောက်ဒိုဆွမ်း။ (ဓာတ်ပုံ – United Nations) ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေနဲ့ အခြားလူနည်းစုတွေအပေါ် ပြင်းထန်လှတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာ လူသားချင်းစာနာမှု ဥပဒေ ချိုးဖောက်မှုဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ တ တိယကော်မတီက မြန်မာ့အရေး ဆုံးဖြတ်ချက် တရပ်ကို ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ တတိယကော်မတီမှာ နိုဝင် ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့က အတည်ပြုခဲ့တဲ့ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကုလအထွေထွေညီလာခံက ဒီဇင်ဘာလမှာ ဆက် လက်ဆွေးနွေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဟောက်ဒိုဆွမ်းကတော့ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ […]